CHILLI POT မှာ မာလရှမ်းကောအပြင် ဘာတွေစားကောင်းသေးလဲ မသိချင်ကြဘူးလားကွယ်…. | Myanmar Digital News
CHILLI POT မှာ မာလရှမ်းကောအပြင် ဘာတွေစားကောင်းသေးလဲ မသိချင်ကြဘူးလားကွယ်….
Chilli Pot ပထမဆိုင်ခွဲတုန်းက နဝဒေးလမ်းထဲမှာ ရှိတာဆိုတော့ ကြိုက်ပေမယ့်လည်း အက်မင်တို့အနေနဲ့ ခဏခဏ သွားမစားဖြစ်ခဲ့ဘူး။ သိပ်မဝေးရင်တောင် ကားပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ ကိုယ်သူနဲ့ ဝေးနေခဲ့တာ။ အခုတော့ Junction Square မှာဖွင့်ပြီဆိုလို့ ဝမ်းသာအားရပဲ အပြေးလေး သွားလိုက်မိတယ်။ ဖွင့်ကာစက ပရိုမိုးရှင်းလည်းပေး သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကလည်း အားပေးကြဆိုတော့ လူများတာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး မရှိမှာစိုးလို့ အခုမှသွားတာပဲ…. ဟိုရောက်တော့လည်း သူ့ဟာနဲ့သူ လူပြည့်နေတာတော့ ကိုယ်လဲမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒီရက်ပိုင်းကွာ ထမင်းစားမကောင်း၊ ပါးစပ်ပျက်သလိုလေး ဖြစ်နေတာ။ အဲ့ဒါလေးလည်း အကြောင်းပြရင်းပေါ့ ဒီကိုရောက်အောင် လာခဲ့လိုက်တယ်။ ဆိုင်ကိုတော့ သိပ်မရှာလိုက်ရပါဘူး။ တတိယထပ်ကိုတက် Secret Garden ဘက်ကသွားပြီး တွေ့တဲ့ ဆိုင်တန်းတွေမှာ ဘယ်ဘက်ကို ရှိုးလိုက်ရင် Chilli Pot ဆိုတာ တန်းနေတာပဲ။ ဆိုင်ကတော့ တစ်ခန်းခွဲစာဆိုတော့ သိပ်မကျဉ်း မကျယ်ပေါ့ဗျာ.. ဒါမယ့် လူကတော့ အပြည့်ပါပဲ။
အက်မင်တို့ သွားတုန်းကတော့ မာလရှမ်းကော စားမယ်ဆိုပြီး သွားခဲ့တာပဲ။ ဒါမယ့် တခြားဝိုင်းက စီချွမ်းစတိုင် ငါးကင်စားနေတာနဲ့ ကိုယ်လည်းမြင်တော့ မနေနိုင် ထပ်မှာလိုက်တယ်။ မာလရှမ်းကောကတော့ အားလုံးလဲ စားဖူးနေကျ သိပြီးသားဆိုတော့ စီချွမ်းစတိုင် ငါးကင်လေးအကြောင်းကို အရင်ပြောပြမယ်။
သူက ကက်ကတစ် တစ်မျိုးထဲနဲ့ ရတယ်ဗျ… ကက်ကတစ်ကိုမှ အတွင်းသားလေးကိုကျက်ရုံ၊ အပြင်သားကို ကြွပ်ရုံပဲ ကြော်ထားပြီးတော့ မာလာခေါက်ဆွဲတွေ၊ ကြွက်နားရွက်လို့ အများကသိထားတဲ့ မှိုခြောက်တွေ၊ ရှမ်းပဲပင်ပေါက်တွေ၊ နောက်မုန်ညင်းရွက်တွေ စုံနေရောပဲ… အဲ့ဒါကိုမှ ငါးကြော်နဲ့ ပေါင်းပြီး ပြန်ချက်ပေးထားတာ။ ခြောက်ခြောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ဘူး။ အရည်နဲ့တော့။ အဲ့ဒီ အရည်ကိုမှ အောက်ကမီး အပူပေးထားတော့ ပွက်ပွက် ပွက်ပွက်နဲ့ပေါ့။ မီးငြိမ်းသွားရင် စားရတာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး။ သူတို့ကိုမီးစာ ထပ်ထည့်ခိုင်းပြီး ပူပူနွေးနွေးလေးစား။ အဆင်ပြေတယ်ဗျ… ငါးဖက်လေး စားလိုက်၊ အရည်လေး သောက်လိုက်နဲ့တော့ ဟန်ကျနေရောပဲ… သူ့အရည်ရဲ့ အရသာကလည်း ဘယ်လိုပြောရမလဲ ငါးရဲ့အချို အရသာပဲ။ အဓိက က ငရုတ်သီးပါပေမယ့် ထင်သလောက်လည်း မစပ်ဘူး။ သူ့အရည်က သောက်လေ သောက်လေ ငတ်မပြေဆိုသလို သောက်ပြီးရင်း သောက်ချင်နေတဲ့ ပုံစံမျိုး။ တော်တော်လေးတော့ စားကောင်း သောက်ကောင်းပဲဗျ… ကက်ကတစ် ဆိုတော့လည်း အရိုးမပါတော့ အာရုံမနောက်ရလို့ အေးဆေးသာ ဆွဲပေတော့ပဲ…။ ဒီငါးတစ်ကောင်မှ ဘယ်လောက်လဲ? (၁၈၀ဝဝ)ပဲရှိတယ်ဗျ… မာလရှမ်းကောနဲ့ ပေါင်းစားမယ်ဆို တကယ် မလိမ်ဘူး ငါးယောက်လောက်တောင် စားလို့ရတယ်။ နှစ်ယောက်လောက်သွားပြီး အဲ့ဒါပါ မှာစားရင် ဘယ်လိုမှကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး။ အက်မင်တို့လည်း ပထမ မာလရှမ်းကော မှာထားတာဆိုတော့ နှစ်မျိုးဖြစ်သွားပြီး နှစ်ယောက်သား တော်တော်ကြာကြာလေး ထိုင်စားလိုက်ရတယ်။ အကောင်ကလည်းကြီး၊ အသားကလည်းများတော့ ဗိုက်လည်းတော်တော်ဝပြီး အရသာလည်းရှိ စားလို့လည်းကောင်း။ အဲ့ဒီအကျိုးက အိမ်ပြန်တော့ ဗိုက်ကြီး ကော့ကော့ကြီးကိုဖြစ်လို့….. (အစားလည်း ငမ်းလိုက်တာကိုး) သူ့ရဲ့ ပုံမှန်အရသာကတော့ နည်းနည်းစပ်မယ်။ ဒါမယ့်ထုံမယ်။ အက်မင်တို့ စားတာကို အထုံ လျှော့ပေးထားတယ် ပြောတယ်။ ဒီကလူတွေက အထုံ မကြိုက်တတ်လို့ အထုံ ရှောင်ပေးထားတယ်။ အကယ်၍ အထုံ ပိုထည့်ချင်လည်း ရတယ်။ အစပ်ပိုစားချင်လည်း ဖြစ်တယ်တဲ့။ ကဲ… လူအုပ်စုတောင့်တောင့်နဲ့ သွားရင် ဒါလေးတော့ မှာစားကြည့်ဗျ.. Chilli Pot ကမာလရှမ်းကောအပြင် ဒါလေးပါ ကောင်းတယ်ဆိုတာ လက်ခံသွားလိမ့်မယ်…
အက်မင်လည်း ဒီကမာလရှမ်းကောလေးနဲ့ ဝေးနေတာကြာတော့ အခုပြန်စားရတော့လည်း တော်တော်လေးစား ကောင်းသား။ သူ့ရဲ့အရသာက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ စားလိုက်တိုင်း အရသာလေးက ညီလို့ Chilli Pot စားဖူးသူတိုင်း ကြိုက်ကြတာတော့ ပြောဖို့လိုမယ် မထင်ပါဘူး။ အသီးရွက်တွေဆိုလည်း တစ်ရွက်၊ နှစ်ရွက်ချင်း ယူလို့ရတာ သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ အချက်ထဲက တစ်ခုဆိုတာလည်း အက်မင် ခဏခဏ ပြောဖြစ်ပါတယ်နော်.. ဒီမှာက ကိုယ်ချိန်စားတတ်ရင် စားတတ်သလောက်က တန်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ မာလရှမ်းကောလေး စားပြီးစပ်ရင်လေ စွမ်းမေ Juice လေးသောက်ကြည့်ဗျ… ဆားငံသီးလေးနဲ့ပဲ ဖျော်ထားပေမယ့် မချဉ်ဘူး။ ဒါမယ့် ခံတွင်းရှင်း အစပ်ပြေပြီး သောက်လို့ ကောင်းတာတော့ အမှန်ပဲမို့ မသောက်ဖြစ်သေးဖူးဆို စမ်းသောက်ကြည့်ကြပါအုံး…
ဈေးဝယ်စင်တာမှာ ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် လူလာလည်းများတယ်။ မာလရှမ်းကောအတွက် ရွေးပြီးပြီဆိုရင်လည်း ချိန်တာပြုတာအတွက် စောင့်ရတာကြာရင် ကိုယ်ယူထားတာတွေကို ခဏပေးထားပြီးခုံမှာ ထိုင်စောင့်နေ။ ကိုယ့်အလှည့်ကျ သူတို့ချိန်ပေးလိမ့်မယ်။ သူတို့ချိန်တော့မှ သွားထကြည့် အဲ့လိုဆိုတော့လည်း မတ်တပ်ကြီး ဖြစ်မနေတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီဘက်ဆိုင်မှာက တစ်ခါထဲရှင်းဖို့ မလိုဘူး။ အကုန်စားပြီးမှ ဘေလ်တောင်းလိုက်လို့ ရတော့အဆင်ပြေတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ရှင်းပြီးသွားမှ ထမင်းထပ်မှာတာတို့၊ ရေမှာတာတွေဆိုရင် ဘေလ်နောက်တစ်ခါ မဖြတ်ရလို့ အဆင်ပြေတယ်လေနော့်….
ကဲ Chilli Pot မှာမာလရှမ်းကောနဲ့ စီချွမ်းစတိုင် ငါးကင်အပြင် Seafood မာလာနဲ့ ငါးကြံမဆိုင်လည်း ရှိပါသေးတယ်။ စွမ်းမေ Juice အပြင် အခြား Fruit juice တွေ ဘာတွေလည်း ရပါသေးတယ်။ ပါဆယ်ထုတ်ချင်လည်း Takeaway တွေ ဘာတွေရပါတယ်။ အော် ဒါနဲ့ ဒီမှာ မာလရှမ်းကာချက်တာက သိပ်မကြာဘူး သိလား။ အက်မင်တို့ သွားတော့ ဝိုင်းတော်တော် ကျနေတာတောင် (၁၅) မိနစ်၊ မိနစ် (၂၀) လောက်ပဲ စောင့်ရတယ်။ နောက် ငါးကလည်း မှာမှ ကြော်ပြီး ပြန်ချက်ပေးတာ ဆိုတော့ သူ့ကိုလည်း (၁၅) မိနစ်၊ မိနစ် (၂၀) စောင့်ပေးရတယ်…. ပူပူနွေးနွေးနဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် အရသာရှိရှိလေးတော့ စားရတယ်ပေါ့…
ကဲ ကဲ အက်မင်လည်း ပြောစရာရှိတာ အကုန်ပြောပြပြီး သွားပြီနော်… ဒါနဲ့ Junction Square ဆိုင်ခွဲက မနက် (၁၀) နာရီကနေစ စားလို့ရပါပြီတဲ့။ ည (၉) နာရီဆိုရင်တော့ ဆိုင်ပိတ်ပါပြီတဲ့….
ဒီဆိုင်လေးက Junction Square တတိယထပ်မှာ ရှိပါတယ်။ Reserve တော့လက်မခံပါဘူးနော်…
အက်မင်တော့ ပြောပြပေးခဲ့ပြီ… စီချွမ်းစတိုင် ငါးကင်လေးကိုတော့ စားကြည့်လိုက်ကြအုံးနော်…